रणनीति - डिजाइन पत्रिका
क्यूआर कोड स्टीकर
शुक्रबार २८ जनवरी २०२२
क्यूआर कोड स्टीकर तपाइँको कार जताततै बेच्न नयाँ तरिका! केवल www.krungsriautomarketplace.com मा जहाँ तपाईं आफ्नो कार बेच्न पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईंको सूचीबद्ध कारको अद्वितीय वेब ठेगानामा आधारित क्यूआर कोड स्टिकर उत्पादन गर्दछौं, तपाईंको चयनित स्टीकर डिजाइनको साथ तपाईंको स्थानमा डेलिभर गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो कारमा स्टीकर संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ! !! खरीददारका लागि, केवल क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् जुन तपाई विक्रेताको कार पार्कि atमा डिपार्टमेन्ट स्टोर, कफि पसल, भवनहरू, र इत्यादिमा देख्नुहुन्छ। कार विवरणहरू तुरून्त पहुँच गर्नुहोस्। विक्रेतालाई कल गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस्। सबै अचानक एक ठाउँमा भयो जहाँ तपाईं दुबै हुनुहुन्छ !!!
शैक्षिक र प्रशिक्षण उपकरण
बिहीबार २७ जनवरी २०२२
शैक्षिक र प्रशिक्षण उपकरण कर्पोरेट मंडलाला एक नयाँ शैक्षिक र प्रशिक्षण उपकरण हो। यो पुरानो मंडाला सिद्धान्त र कर्पोरेट पहिचानको एक नवीन र अद्वितीय एकीकरण हो जुन टीम टोली र सम्पूर्ण व्यापार प्रदर्शनलाई बृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको हो। थप यो कम्पनीको कर्पोरेट पहिचानको नयाँ तत्व हो। कर्पोरेट मंडला टीमको लागि समूह गतिविधि हो वा व्यवस्थापकको लागि व्यक्तिगत गतिविधि। यो विशेष कम्पनीको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो र यो टोली वा व्यक्तिद्वारा स्वतन्त्र र सहज ढ manner्गले रंगीएको छ जहाँ सबैले कुनै पनि र field वा क्षेत्र छनौट गर्न सक्दछन्।
पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लू डिटेक्टर
बुधबार २६ जनवरी २०२२
पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लू डिटेक्टर प्रिज्मा सबैभन्दा चरम वातावरणमा गैर-आक्रमणकारी सामग्री परीक्षणको लागि डिजाइन गरिएको हो। उन्नत वास्तविक-समय इमेजिंग र थ्रीडी स्क्यानिंग समावेश गर्न यो पहिलो डिटेक्टर हो, दोष व्याख्या धेरै सजिलो बनाउँदछ, साइटमा टेक्निशियन समय घटाउँदै। वस्तुतः अविनाशी संलग्न र अद्वितीय बहु मोड मोडहरूको साथ, प्रिस्माले सबै परीक्षण अनुप्रयोगहरू ओभर पाइपलाइनदेखि एयरोस्पेस अवयवहरू सम्मिलित गर्न सक्दछ। यो अभिन्न डेटा रेकर्डिंग, र स्वचालित पीडीएफ रिपोर्ट जेनेरेसनको साथ पहिलो डिटेक्टर हो। ताररहित र इथरनेट कनेक्टिविटीले एकाईलाई सजिलै अपग्रेड गर्न वा निदान गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रयोगशाला पानी शुद्धीकरण प्रणाली
मङ्गलबार २५ जनवरी २०२२
प्रयोगशाला पानी शुद्धीकरण प्रणाली पूर्णलाब कोरस पहिलो प्रयोगात्मक पानी शुद्धिकरण प्रणाली हो जुन व्यक्तिगत प्रयोगशालाको आवश्यक्ता र ठाउँहरू फिट गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले सफा पानीको सबै ग्रेड वितरण गर्दछ, स्केलेबल, लचिलो, अनुकूलित समाधान प्रदान गर्दै। मोड्युलर तत्त्वहरू प्रयोगशाला भर वितरित गर्न सकिन्छ वा एक अर्कासँग अद्वितीय टावर ढाँचामा जडान गर्न सकिन्छ, प्रणालीको पदचिह्न न्यूनतम गर्दै। ह्याप्टिक नियन्त्रणहरूले अत्यधिक नियन्त्रण योग्य वितरण प्रवाह दर प्रस्ताव गर्दछ, जबकि प्रकाशको एक हेलो कोरसको स्थिति जनाउँदछ। नयाँ टेक्नोलोजीले कोरसलाई सबैभन्दा उन्नत प्रणाली उपलब्ध गराउँदछ, वातावरणीय प्रभाव र चालू खर्चहरूलाई घटाउँदै।
सोमबार २४ जनवरी २०२२
झूमर यो कला - प्रकाश वस्तुको साथ कला वस्तु। जटिल प्रोफाइलको छतको साथ विशाल कोठा, कमुलस क्लाउडहरू जस्तो। झुण्ड्याउने ठाउँमा फिट हुन्छ, अगाडि भित्ताबाट छतमा सजिलै बग्दछ। पातलो ट्यूबहरूको लोचदार बन्डिंगको साथ क्रिस्टल र सेतो तामचीनी पातले विश्वभरि उडान घुम्टोको छवि सिर्जना गर्दछ। प्रकाश र सुनौलो चमक उडने चराहरूको प्रशस्तताले विशालता र आनन्दको भावना सिर्जना गर्दछ।
क्रेडिट कार्ड लोयल्टी प्रोग्राम
आइतबार २३ जनवरी २०२२
क्रेडिट कार्ड लोयल्टी प्रोग्राम यो एक सह ब्रान्ड बैंक कार्ड वफादारी कार्यक्रम जारीकर्ता बैंक र साझेदार शिक्षा संस्थाको बीच प्रायोजित छ कि सिकाइको घण्टाको अधिकारको रूपमा पुरस्कार दिन्छ जुन ठूलो इकाईहरूमा जम्मा गरियो जुन क्रेडिटधारकलाई उसको कार्डमा खर्च गरेर दिइने क्रेडिट घण्टा अधिकार हो, जमिनमा क्रेडिट घण्टा अधिकार हुनेछ जब ऊ यो पार्टनर शिक्षा संस्थानमा शिक्षा कोर्स गर्दछ उसले रिडिम हुन सक्छ। दिईएको क्रेडिट घण्टा अधिकारहरूको बदलामा, बैंकले यस संस्थासँग ईन्टरचेन्ज शुल्क साझेदारी सम्झौता गर्नेछ। यस परियोजनाको लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई शिक्षाको लक्ष्य र शिक्षा क्षेत्र हासिल गर्न आर्थिक सहयोग गर्नु हो।
Bridal Veil झूमर शनिबार २२ जनवरी
Illusion वेबसाइट शुक्रबार २१ जनवरी
Smartstreets-Smartbin™ सिगरेट / गम बिन बिहीबार २० जनवरी
जनवरी २०२२ (93)
नोभेम्बर २०२१ (90)
दिन को डिजाइन साक्षात्कार शनिबार २२ जनवरी
दिनको लिजेन्ड लिजेन्ड शुक्रबार २१ जनवरी
दिन को डिजाइन बिहीबार २० जनवरी
दिन को डिजाइनर बुधबार १९ जनवरी
दिन को डिजाइन टीम मङ्गलबार १८ जनवरी
क्यूआर कोड स्टीकर शैक्षिक र प्रशिक्षण उपकरण पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लू डिटेक्टर प्रयोगशाला पानी शुद्धीकरण प्रणाली झूमर क्रेडिट कार्ड लोयल्टी प्रोग्राम